Ikhamera Ezalelwa Umzimba Kungenzeka Ungabi Isinqumo Sokugcina | Izixazululo ze-OMG
Umqondo uyakha ukuthi lapho wonke amaphoyisa esefakwe nekhamera yomzimba, impikiswano izokhishwa ngokudutshulwa kwamaphoyisa nokunye ukusetshenziswa kwamandla ngoba "okwenzekile ngempela" kuzobekwa kuvidiyo yonke ukuze ibone. Amakhamera omzimba ayithuluzi elidingeka ngokwengeziwe lokuba sobala. Kepha iminyango yamaphoyisa isadinga ukwenza okuthe xaxa ukwenza ngcono ukungafihli kanye nokuziphendulela.
Akungatshazwa ukuthi amakhamera omzimba anjengezinseshi ezibizayo, amasamu omakhalekhukhwini, nezinsimbi zokubhekwa zinganikeza umbono oyingqayizivele ngokuhlangana kwamaphoyisa futhi, ezimeni eziningi, kungenzeka asize izikhulu. Kepha njengamanye lawo madivayisi, ikhamera efakwe umfaniswano wakho noma ekhanda lakho inemikhawulo edinga ukuqondwa nokucatshangelwa lapho kuhlaziywa izithombe, ziyaqopha.
Ikhamera ayilandeli amehlo akho noma ibone njengoba ibona
Ikhamera ayilandeli ngamehlo kogqokile njengoba umcimbi wenzeka kuleli zinga lakamuva lokuthuthuka, ikhamera yomzimba akuyona eyokulandelwa iso. Leyo divayisi eyinkimbinkimbi ingalandela ukuhamba kwamehlo akho ne-superimpose kumibuthano ebomvu yevidiyo emaka ngqo lapho ubheka khona kusuka kumicrosecond eyodwa kuya kolandelayo.
Ikhamera yomzimba ifaka isithombe esibanzi kepha ayikwazi ukubhala ukuthi usibheke ngasiphi isimo leso. Uma ubheka kude lapho ikhamera igxila khona, kungenzeka ungaboni senzo ngaphakathi kohlaka lwekhamera okubonakala ngathi kwenzeka 'phambi kwamehlo akho.' Kungaba nokuxhumeka okukhulu phakathi kwensimu yakho yokubuka namakhamera. Kamuva, umuntu obuyekeza lokho okubanjwe kukhamera bese ahlulela okwenzayo angaba nomqondo ohluke kakhulu walokho okwenzekile ngaleso sikhathi okwenzeka ngaso ngesikhathi.
Ijubane lekhamera lihlukile ngejubane lempilo
Ngoba amakhamera womzimba aqopha ngejubane elikhulu kakhulu kunesitolo esivamile esisebenzayo noma amakhamera wokuphepha wokulungisa, mancane amathuba okuba imininingwane ebalulekile izolahleka kwizikhala ze-millisecond phakathi kwezinhlaka, njengoba kwesinye isikhathi kwenzeka ngalawo madivayisi we-cruder. Abantu abangaqondi inqubo yokusabela ngeke bayifaka lapho bebuka i-video. Bazocabanga ukuthi umphathi uhambisana nesivinini sesenzo njengoba ikhamera ikuqopha. Ngakho-ke, ngaphandle kokufaka okunolwazi, ngeke bakwazi ukuqonda ukuthi iphoyisa lingagcina kanjani ngokubeka imijikelezo ngemuva komsolwa noma ngokudubula ngokungeziwe ngemuva kokuba usongo seluphelile.
Ikhamera ingabona kangcono ukwedlula indlela ocabanga ngayo
Ukucabanga kobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu kwamakhamera omzimba kuvumela ukuba baqophe ngokucacile kuzilungiselelo eziningi eziphansi. Lapho ukubonwa kwevidiyo kuhlolwa kamuva, kungenzeka ukuthi ukwazi ukubona izici zesigameko ngemininingwane ebukhali ukwedlula yeka ngesikhathi ikhamera icushiwe. Ngakolunye uhlangothi, amakhamera awenzi ngaso sonke isikhathi ukusebenza okuhle kokukhanyisa. Ukuhamba kungazelelwe kusuka kokukhanya okukhanyayo noma okuphambene nalokho, ikhamera ingafihla zonke izithombe.
Umzimba wakho ungavimba ukubukwa
Ukuthwebula ikhamera kungakanani kwesigameko kuncike kakhulu ekutheni sikuphi nokuthi isenzo senzeka kuphi. Ngokuya ngendawo nendawo, isithombe singavinjelwa yizitho zakho zomzimba, kusuka ekhaleni lakho kuye ezandleni zakho. Amakhamera awakwazi ukuthwebula ukubuka kwe-360degree ngesimo esingahle sivele. Le nto ngeke isinikeze isithombe sangempela sesigameko. Uma udubula isibhamu noma iTaser, ngokwesibonelo, ikhamera esifubeni sakho kungenzeka ingarekhodi okungaphezulu kwezingalo nezandla zakho ezeluliwe. Noma nje ukufiphaza isimo sakho kungasitha umbono wekhamera. Izikhathi ezibucayi ngaphakathi kwesimo ongabona mhlawumbe siphuthelwe ngokuphelele ngumzimba wakho we-cam ngenxa yalezi zinto eziguquguqukayo, ekugcineni ezifihla lokho umbuyekezi angadinga ukukubona ukwenza isinqumo esifanele.
Ikhamera iqopha kuphela ku-2-D
Ngoba amakhamera awarekhodi ukujula kwenkambu ubukhulu besithathu obonwa yiliso lomuntu ngokunembile ukwahlulela amabanga endaweni yokubekwa kwawo kungaba nzima. Ngokuya ngelensi ethintekayo, amakhamera angahle acindezele amabanga phakathi kwezinto noma azenze zibonakale zisondele kakhulu kunalokho eziyikho ngempela, ngaphandle komqondo ofanele webanga umbuyekezi angachaza ngokungeyikho izinga lokusongela iphoyisa ebelibhekene nalo. Kukhona izindlela zobuchwepheshe zokunquma amabanga kumarekhodi we-2-D kodwa lezi azijwayelekile noma zitholwa ngabaphenyi abaningi.
Ikhamera eyodwa ingahle inganele
Amakhamera amaningi lapho aqopha umcimbi onamandla, maningi amathuba akhona okucacisa ukungaqiniseki. I-engeli, izibani ezisetshenzisiwe, nezinye izinto cishe kuzohlukahluka ngokubuka kwesikhulu kuya kwesinye, futhi ukuvumelanisa i-footage up kuzonikeza imininingwane ebanzi yokuqonda amandla walokho okwenzekile. Okubukeka njengesenzo sokuzithoba esivela kolunye uhlangothi kungahle kubonakale kufanelekile kusuka kolunye.
Cabanga ngokuhlaziywa kwemidlalo kumdlalo webhola. Ekuxazululeni izingcingo ezisondelene, onompempe bafuna ukubuka isenzo kusuka kumakhamera amaningi ngangokunokwenzeka ukuqonda okubonayo. Ngokufanele, izikhulu zifanelwe ukucatshangelwa okufanayo. Inkinga ukuthi ezikhathini eziningi kunekhamera eyodwa kuphela ebandakanyekayo, uma iqhathaniswa nedlanzana elingase lithintwe emcimbini wezemidlalo, futhi kuleso simo, ukulinganiselwa kufanele kugcinwe kuqina engqondweni.
Ikhamera ayisoze yangena esikhundleni sokuphenya ngokuphelele
Lapho abaphathi bephikisana nokugqoka amakhamera, izakhamuzi ngezinye izikhathi zicabanga ukuthi zesaba “ukucaca.” Kepha esikhathini esiningi bakhathazeka ngokuthi ukuqoshwa kwamakhamera kuzonikezwa kungafanele, uma kungenjalo kuphela, uma behlulela izinto abazenzayo. Ukuqoshwa kwekhamera akumele kuthathwe kuphela njengeQiniso ngesigameko esiphikisayo. Udinga ukusindwa futhi kuhlolwe uma kufakazwa ubufakazi bokuthi ufakazi, abameli bezomthetho, isitatimende sesikhulu esibandakanyekile, nezinye izinto zophenyo olunobulungiswa, olunzulu nolungakhethi olubheka izinto zabantu. Ukulinganiselwa kwezinsimbi zomzimba nabanye kudinga ukuqondwa ngokuphelele futhi kuhlolwe ukukhulisa ukusebenza kwabo kahle futhi baqinisekise ukuthi ababhekwa 'njengezinhlamvu zomlingo' ezingenakugwenywa ngabantu abangaqondi ngokuphelele ubuqiniso bamandla ashukumisayo.
Iziphathimandla azivuli ikhamera "evuliwe"
Ucwaningo loMnyango wamaPhoyisa waseNew Orleans luthola cishe izehlakalo ze100 lapho amaphoyisa esebenzisa khona amabutho futhi egqoke amakhamera omzimba kodwa azange azikhanyise.
NgoSepthemba odlule, amaphoyisa amabili aseVermont adubula abulala owesilisa ngenkathi egqoke amakhamera omzimba. Akekho umphathi owaphendulile ngaphambi kokudubula; bobabili basulwa kukho konke ukona.
Ngaphambi nje kokungqongqoza amazinyo kowesifazane, abe-Daytona Beach, eFlorida, amaphoyisa acime amakhamera abo omzimba.
NgoSepthemba, amaphoyisa aseWashington, DC, adubula uTerrence Sterling, indoda emnyama engenazibhamu i-31, ngemuva kokuba isithuthuthu sayo sangena emotweni yabo. Kodwa ngokungahambisani nenqubomgomo yesiFunda, akekho noyedwa kubaphathi osendaweni yesehlakalo owasebenza amakhamera wabo kuze kube ngemuva kokudubula. I-video esakazwayo idolobha idonsa izikhathi zokugcina zikaSterling, kepha ividiyo iqala ngaphezu komzuzu ngemuva kokudutshulwa. Leli cala lisaphenywa yihhovisi Lommeli WaseMelika. Manje, izikhulu ze-DC ziyacelwa ukuthi ziqinisekise nabathumbi ukuthi bazishintshile amakhamera abo womzimba lapho bephendula izingcingo noma bexhumana nomphakathi.
Ngubani Othengisa Umzimba-Worn Camera Technology
Iminyango eminingi yamaphoyisa isebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba owenziwe i-Axon (ngaphambili eyayi-Taser), enikeza amakhamera wamahhala futhi ithengise izinsiza zokugcina imininingwane. Abanye abathengisi bafaka i-Aventura, iBlack Mamba, iBrickHouse Security, iBrimtek, COBAN, Idatha911, DEI, Digital Ally, FlyWIRE, Global Justice, GoPro, HauteSpot, HD Protech, Kustom Signals, L-3 Mobile-Vision, Law Systems, Marantz Professional, I-Martel, i-Motorola, i-Panel, i-Patrol Eyes, uPaul Conway, iPinacle, i-PRG, i-Primal USA, i-Utility Inc., i-Pro-VISion, i-Reveal Media, i-Safety Innovations, i-Security Vision, i-Titan, i-Utility, i-VIEVU, i-VP360, i-WatchGuard, i-WOLFCOM, i-Zepcam, kanye neZetronix.
Ngaphezu kokuthengisa amakhamera omzimba, abanye abathengisi bahlinzeka nokugcinwa kwedatha okwenziwa kwesiteji. Isibonelo, abahlinzeki bekhamera abagqoke umzimba i-OMG basebenza ngomthetho banikeza isitoreji sangaphakathi nekhadi le-SD, futhi bangumnikazi wenkampani http://omg-solutions.com/ .
UStephon Clark, indoda yase-Afrika-yaseMelika, wabulawa ngamaphoyisa aseSacramento ngemuva kwendlu kagogo wakhe, abantu baphikisana nesenzo samaphoyisa. Amaphoyisa ekuqaleni athi acabanga ukuthi uClark wayehlomile. Kepha ngemuva kokudubula, amaphoyisa awatholanga zikhali kuClark, kwakungu-iPhone kuphela. Umphathi wamaphoyisa wedolobha uphendula ngokushesha kulo mbhikisho ngokunikeza abaseshi bekhamera ukuze bazame ukusiza umphakathi, ngaphandle kokubheka ukuthi kwenzekeni ngempela. Kepha i-footage ayikwazi ukuxazulula lolu daba.
Intukuthelo ngezehlakalo eziphezulu kanye nokushintshwa kombono womphakathi kuholele ekutheni iminyango yamaphoyisa emhlabeni wonke ihlomise izikhulu eziningi ngamakhamera futhi zengeza nokuqeqeshwa okuzonyusa. Kepha abekho abomthetho bendawo, wombuso noma wenhlangano abavimbele amaphoyisa ukuthi asebenzise amandla abulalayo angenasidingo. Esikhundleni salokho, abenzi bezomthetho kuwo wonke amabanga basavumela amaphoyisa ukuba akwazi ukusebenzisa amandla abulalayo okuvunyelwa umthetho-sisekelo. Impela, ukuqhathanisa namaphoyisa kukhombisa ukuthi lokhu kuhlonishwa kukhulu kakhulu ukuvikela amaphoyisa ngentengo yokufa kwabantu.
Anon., Nd I-EFF. [Online]
Itholakala ku: https://www.eff.org/pages/body-worn-cameras
[Kufinyelelwe ngo-Okthoba 18, 2017].
Anon., Sep 23, 2014. Force Isayensi Isikhungo. [Online]
Itholakala ku: https://www.policeone.com/police-products/body-cameras/articles/10-limitations-of-body-cams-you-need-to-know-for-your-protection-Y0Lhpm3vlPTsJ9OZ/
Hardy S, BLRPCSWPP-HS, 2017. Impilo Yengqondo eMithini Yomndeni. [Online]
UKetchell, M., Januwari 18, 2016. ISIVUMELWANO. [Online]
Itholakala ku: http://theconversation.com/u-s-laws-protect-police-while-endangering-civilians-52737
IPASterNack, A., nd FAST CCOMPANY. [Online]
Itholakala ku: https://www.fastcompany.com/3062837/it-fell-off-body-camera-problems
Ikhamera ye-Worn-Worn kungenzeka ingabi Isinqumo Sokugcina igcine ukuguqulwa: Disemba 3rd, 2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-3193 Ukubuka kwe-9 Namuhla